သတင်း - အရွယ်ရောက်ပြီးသော အနှီးများဝယ်သည့်အခါ ရေစုပ်ယူမှုနှင့် အသက်ရှူနိုင်မှုတို့ကို ဂရုပြုပါ။
Adult Diapers သည် လူကြီးများအတွက် သင့်လျော်သော တစ်ခါသုံးအနှီးများဖြစ်သည်။အသုံးပြုသူ အများစုသည် လေတိုက်သူများ နှင့် မတိုက်ဆိုင်သော လူများ ဖြစ်ကြသည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ထုတ်ကုန်များ၏ လူမှုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အသိပညာများ တိုးပွားလာမှုနှင့်အတူ စားသုံးသူများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ခံခဲ့ရသည်။မကြာသေးမီက၊ စျေးကွက်စည်းမျဉ်းများအတွက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှလူကြီးအနှီးစားသုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသော အနှီးများဝယ်သည့်အခါ ဤအချက်ငါးချက်ကို သတိပြုပါ။
1. နာမည်ကောင်းရှိသော နာမည်ကြီးထုတ်လုပ်သူများထံမှ ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ပြီး ပုံမှန်ချန်နယ်များမှ ဝယ်ယူပါ။
2. အရွယ်ရောက်ပြီးသော အနှီးများကို အပျော့စား မထိန်းနိုင်သော အနှီးများ၊ အလယ်အလတ် မထိန်းနိုင်သော အနှီးများနှင့် အသုံးပြုသူ၏ မထိန်းနိုင်မှု အတိုင်းအတာအလိုက် ပြင်းထန်သော အနှီးများကို ခွဲခြားထားသည်။စားသုံးသူများသည် ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်အလိုက် ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
3. ဝယ်ယူသည့်အခါ သုံးစွဲသူ၏အလေးချိန်နှင့် တင်ပါးလုံးပတ်အလိုက် သင့်လျော်သောအရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ပါ။ရွေးချယ်ရန်အတွက် ပက်ကေ့ဂျ်၏ အပြင်ဘက်တွင် အမှတ်အသားပြုထားသော နံပါတ်ကို သင် ကိုးကားနိုင်ပါသည်။
4. ထုတ်ကုန်၏ ရေစုပ်ယူမှု၊ ပေါ့ပါးမှုနှင့် လေ၀င်လေထွက်နိုင်မှုကို အာရုံစိုက်ကာ နူးညံ့သောမျက်နှာပြင်နှင့် ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံ ဒီဇိုင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ပါ။
5. ဝယ်ယူသည့်အခါ အနှီးများ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို စစ်ဆေးပါ။တစ်ကြိမ်တွင် အလွန်အကျွံဝယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို အကြာကြီးသိမ်းဆည်းရန် အကြံပြုလိုပါသည်။၎င်းတို့ကို မဖွင့်ထားသော်လည်း ယိုယွင်းပျက်စီးမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ရှိသည်။
ဒါတွေကို စိတ်ထဲထားဖို့ ဘုံအသိကို သုံးပါ-
1. အနှီးများကို အချိန်မီ လဲလှယ်သင့်ပြီး အရေပြားကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုသည့် အရေပြားကို သန့်ရှင်းစေရန် ပြောင်းလဲသည့်အခါ အရေပြားကို ဆေးကြောသင့်ပါသည်။
2. ထုပ်ပိုးထားသော အနှီးများကို ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထားရှိသင့်ပြီး ထုတ်ကုန်သည် စိုစွတ်နေပြီးနောက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
3. အရွယ်ရောက်ပြီးသော အနှီးများသည် ထူးခြားသော ရေစုပ်ယူမှု ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိပြီး သန့်ရှင်းသော လက်သုတ်ပုဝါများဖြင့် အစားထိုး၍မရပါ။
ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 12-2022
Negative Ion Sanitary Napkin, Cotton Sanitary Pad, Soft Women Sanitary Towel, Sanitary Pad 245mm, Lady Pads, Female Sanitary Pad,